Xuskii 15aad Ee Maalinta Xoolo Dhaqatada Itoobiya Oo Maanta Si Heer Qaran Ah Loogu Xusay Magaalada Samara Ee Deegaanka Canfarta. - Cakaara News
Xuskii 15aad Ee Maalinta Xoolo Dhaqatada Itoobiya Oo Maanta Si Heer Qaran Ah Loogu Xusay Magaalada Samara Ee Deegaanka Canfarta.
Samara(CN) Axad.Jan.25.2015, waxaa taniyo shalay magaalada Samara looga dabaal dagayaa xuska qaran ee maalinta xoolo dhaqatada Itoobiya oo markii 15aad si heer qaran ah loogu xusayo magaalada Samara.
Waxaana maanta munaasabadii qaran ee maalainta xoolo dhaqatada Itoobiya oo markasta la qabto 17-ka bisha Dir lagu xusayaa magaalada Samara ee deegaanka Canfarta. Munaasabada ayaa maanta aroornimadii kabilaabatay garoonka kubada cagta ee magaalada Samara ee xarunta deegaankaasi Canfarta.
Munaasibadan ayaa waxaa kasoo qayb galay raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn iyo marwada koobaad ee Marwo Roman, madaxwayanaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxwaynayaasha deeganada, wasiiro iyo madax sare oo heer federaal iyo heer deegaan isugu jiray, marti sharaf kala duwan, iyo xubno kasocday xoolo dhaqatada .
Munaasabada oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa khudbado kasoo jeediyay madax ay kamid ahaayeen madaxwaynaha deegaanka Canfarta mudane Ismaaciil Cali Sirro oo kahadlay ahmiyada maalintan ay u leedahay xoolo dhaqatada oo markasta la qabto 17-ka bisha Dir iyo xaalada horumarineed ee xoolo dhaqatada..
R/wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn ayaa khud bad dheer kasoo jeediyay isagoo ugu horayntii uga mahad celiyay deegaanka iyo haayadaha federaalka ee munaasibada diyaariyay islamarkaana sheegay in ay maalintani ay mudnaan gaar ah u leedahay dadka xoola dhaqatada ah oo lagu horumarinayo ahmiyada ay leeyihiin.
Raysal wasaaruhu waxaa uu aad uga hadlay barnaamijka siyaasadeed ee xooladhaqatada iyo beeralayda isagoo sheegay in shantii sano ee u danbaysay guulo laga soo hoyiyay iyadoo kor loo qaaday barnaamijka waraabka iyo dooxooyinka oo kaalin kaqaadanaya xoolo dhaqatada, wuxuuna sheegay inuu yahay mid kudayasho mudan Afrika iyo guuda ahaanba caalamka. R/wasaare Hailemariam ayaa sheegay inuu xuskani kaga duwan yahay kuwi hore maadama laqabtay wakhti uu dhamaanayo qorshihii shanta sano ee isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha islamarkaana uu bilaabanayo wareegii labaad ee GTP-2.
Munaasibadan ayuu raysal wasaaruhu abaal marino kala duwan gudoonsiiyay xubnihii kasocday xoola dhaqatada dalka, maalgashiyaal, degmooyinka horumuudka ah, iyo iskaashatooyinka. Deegaanka Soomaalida ayaa noqday kii ugu badnaa xubnihii la abaal marinayay iyadoo 68 xubnood laga gudoonsiiyay abaal marinta xoolo dhaqatada. Mudane Hailemariam ayaa ugu danbayntii u dardaarmay in shacabwaynaha reer Itoobiya ay ilaashadaan horumarkooda islamrkaana ay kaalintooda ka qaataan sidii ay doorashada 5aad ee dalka iyo deegaanadu ay u noqon lahayd mid nabadgaliyo.
Xuskan maalinta qaran ee xoolo-dhaqatada oo ay kusugnaayeen madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenka mudane Cabdixakiim Cigaal Cumar ahna wasiirka horumarinta magaalooyinka iyo warshadaha iyo masuuliin kale oo heer deegaan, ayaa madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar lagu doon siiyay abaal-marino kala duwan.
Munaasibadan maanta ayaa waxaa lagu gudoonsiiyay deegaanka Soomaalida Itoobiya qabashada xuska qaran ee maalinta xoolo-dhaqatada Itoobiya ee kan kuxiga oo noqonya xuska 16aad iyadoo deegaanka Soomaalida Itoobiya uu markii labaad qabanayo xuska maalinta xoolo-dhaqatada toobiya.
Waxaana maanta galinkii danbe uu r/wasaaruhu kulamo iyo shirar layeeshay madaxdii deegaanada iyo xubnihii kasocday deegaanada taasoo looga arinsanayay qorshayaasha lagu horumarinayo xoolo dhaqatada. Waxayna madaxdu booqanaysay goobaha waxsoosaarka iyo xoolo-dhaqatada oo ee deegaankaasi Canfarta.
Madaxdii iyo marti sharaftii munaasibadanqaran ayaa caawa kusugan magaalada Samara ee xarunta deegaanka Canfarta.